Falaqayn Kooban: Is-diidooyinka Miisaaniyada 2018-ka.W/Q.Cabdifataax Rashiid..Arsanal. | Togdheer News Network
Falaqayn Kooban: Is-diidooyinka Miisaaniyada 2018-ka.W/Q.Cabdifataax Rashiid..Arsanal.
6. Dal kasta wuxu horumarkiisu gaadhsiisan yahay halka ay waxbarashadiisu gaadhsiisan tahay. Sidoo kale dal kasta wuxu horumarkiisu yahay hadba sida uu waxbarashadiisa u maalgaliyo. Haddaba innaga oo ka duulayna fikirkaas, si aynu horumar u gaadhno, waxa muhiim ah waa inaynu waxbarashada u qoondayno ugu yaraan 20% miisaaniyadda qaranka ah.
7. Isugaynta miisaaniyadda wasaaradaha Beeraha, xannaanada xoolaha iyo kalluumaysiga, Biyaha, Macdanta iyo tamarta, Deegaanka, Ganacsiga iyo warshadahu waxay noqonayaan 5.3% miisaaniyadda waxaana ka miisaaniyad badan xafiiska madaxtooyada (Ex Wasaaradda Madaxtooyada) oo noqonaysa 7.2% (SLSH 120,671,383,042). Miisaaniyaddan madaxtooyada loo qoondeeyay waxay sidoo kale labanlaab ka badan tahay tii sannadkii 2017 ee Wasaaradda Madaxtooyada oo ahayd (SLSH 56,534,978,865).